မောင်းထောင်မြေဇင်း တရားစခန်းတွင် အမှတ်စဉ် (၇) ယောဂီ တစ်ဦး၏ ကိုယ်တွေ့ မျှဝေမှုများ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ဆရာတော် ဦးကေလာသ၊ ဆရာတော် ဦးပညာဒီပ၊ ဆရာတော် ဘုရားများအား ဦးခိုက်ပါ သည် ဘုရား၊ တပည့်တော် အမှတ်စဥ်.၇ရက်…၃၀. တရားစခန်း ယောဂီ..ပါဘုရား ၊‌ေကျေးဇူး ကြီး လှပါသော ဆရာတော်များ နှင့် အကျိုးတော် ဆောင်ပေး ကြပါ သောစေတ နာရှင်များ Admin များရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်. .တပည်တော် တို့ရဲ့ ကပ်ဘေး ကာလမှာ. .အိုးမကွာ..အိမ်မကွာ နှင့်ထူး ခြားသော တရားများကို ရရှိခွင့်၊တရား နာယူခွင့်များ ရရှိခဲ့ကြတာ မို့တန်ဖိုးကြီး လှတာမို့ ဝမ်းသာ ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ် အမှန်တိုင်း ဝန်ခံရရင် တပည့်တော် တရား စခန်းဝင် တဲ့တစ်လတာ မှာ သမာ ဓိ အရန်းမကောင်းခဲ့ သလို တချို့ ယောဂီတွေ တရားလျောက် တာတွေနား ထောင်ပြီး ပထမပိုင်း မှာ တော်တော် အားငယ်မိနေတာ…နမိတ် ရတော့လည်း သူများတွေ လို လင်းလင်း ထင်းထင်း မရှိတော့..ဘုရားဖူး သခ်န်းစာ ရောက်ရင် ဘုရားဖူးခွင့်မ ရဖြစ်မှာ ပဲဆိုပြီး စိတ်တော့ နဲနဲ ပျက်မိ နေခဲ့တာ အမှန်ပါ၊ ထင်တဲ့ အတိုင်း ဘုရားဖူး ပထမနေ့ မှာ ဆရာတော် ဦးကေလာသမှ ရွှေတိဂုံ ဘုရား၊ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား၊ မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိ ဘုရား ၃ဆူဖူးဖို့စိတ် ညွှတ်တာ ပထမဘယ် လိုမှမရခဲ့ပါဘူး..။
.‌ေနောက်မှ ဖူးချင်တဲ ဆန္ဒ ၊‌ေလောဘ များနေ တာကို သတိထားမိပြီး.. ဆရာတော် ဘုရားသွန် သင်တဲ့ အတိုင်း စိတ်ကို အေးအေးထားပြီး ဝါယူဝါမှတ် လေးတွေ ပြန်မှတ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ နမိတ် အလင်းတန်း လေးတခု မြင်မှ စိတ်ကို ဘုရားကို ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ ညွှတ်လိုက်မှ ရွှေတိဂုံနဲ့ ကျိုက် ထီးရိုး စဖူးရ တော့တော်တော် အားတက် သွားခဲ့ တယ်။
တရား ထိုင်ချိန်က လည်း၄ ကြိမ် လောက်ပဲရှိ တာရယ်အိမ် ကမြေးတွေရဲ့ အသံတွေရှောင် ရတာ နဲ့ဆိုတော့ မဟာမြတ်မုနိ မဖူးလိုက် ရတော့.. စိတ်ထဲ မကောင်းတော့ ဖြစ်မိနေပြီး.. တချို့ ယောဂီ တွေများ တော်လိုက်တာ….. သမာဓိ အားကောင်းပြီး ဘုရားတွေကို တကယ် ရောက်ပြီး သက်ရှိ ထင်ရှား ဘုရားဖူး တွေ့သူတွေ.. ဆံတော် ဓာတ်တော် တွေဖူးကြရ တာတွေကြားရ တော့အားကျ သာဓု ၃ ‌ေခေါ်မိပါ တယ်၊ ဟုတ်ပါ့ မလားလို့ တောင် သံသယ အနည်းငယ် ဝင် မိတာ ဝန်ခံပါ တယ်၊ ဒါနဲ့နောက် တစ် နေ့အိန္ဒိယဘုရား… ဖွား..ပွင့်..‌ေဟော.. စံဖူးတဲ့နေ့ လည်း ရောက်ရော တ ခြား ယောဂီတွေ အားကျ စိတ်ရယ်၊ ဖူးချင် စိတ်တွေနဲ့ အရင် နေ့တွေက ထက် တရား ပိုထိုင် ပြီး သမာဓိ ထူထောင်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်၊ သမာဓိအလင်း အားအရမ်း မကောင်းခဲ့ ပေမဲ့ ဖွား…………ပွင့်.. .‌ေဟော ၃‌ေနေရာ ကိုထင်ထင် ရှားရှားနဲံ..ပရိနိဗ္ဗန်စံ နေရာ မှိန်ရောက် ပြီးဖူးရတာ မို့ ရင်ထဲမှာ ပီတိ တွေ လှိုက်ပြီး ခံစားလိုက် ရ တော့…မျက် ရည်ကျ မိတဲ့ အထိပါဖြစ် ခဲ့ရ ပါတယ်၊ နမိတ် အ လင်း တအားကောင်း တဲ့သူတွေ ဆို နတ်ပြည် ဘုရားတွေ ထင်ထင် ရှားရှားဖူး တွေကြတာ ကြား ရ ယုံနဲ့ ပီတိဖြစ် သာဓု ခေါ်ပါ တယ်။
ကျွန်မ တော့ နတ်ပြည် ဘုရားတွေ ထင်ရှားစွာ မဖူးခဲ့ရ ပေမဲ့ကြိုး စားပြီး တရားအား ထုတ်ရင် ငါလည်း တစ်နေ့ ဒီယောဂီ တွေလိုပဲဖူး တွေ့နိူင်မှာ ကိုယုံ ကြည် လက္ခံလာပါ တယ်၊ သမထရဲ့ စွမ်းအား တွေကို လည်းပို ပြီးသိမြင် လာပါ တယ် ၊ဝိပဿနာ အပိုင်းရောက် တော့လည်း ဥာဏ် စဥ်တွေ အဆင့်ဆင့် ဟောကြား ပြသ သွားတာ တွေဟာ စည်းစ နစ်ကျ ပြီး အကျိုး ထူးလှ တာ ကို တွေ့သိ လာလို့ ထိုင်ချိန် နည်းပြီး လောကီမှု တွေကြား မှာအား ထုတ်တာ တောင်ဒီ လောက် အကျိုး ထူးရင်၊ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်လှ တဲ့တရား စခန်းမှာ တနေ့..၈.. ကြိမ်ထိုင် ပြီးအေးချမ်း စွာ တရား အားထုတ် ရင်အကျိုး ထူးတရား ထူးတွေရ မှာပဲလို့ တွေးရင်း.. ကပ်ရောဂါ ကြီးပြီး သွားရင် တော့…တရားစခန်း ဝင်နိုင်အောင် ကြီုးစားရ မယ်ဆိုတဲ့ ဓမ္မအသိ. …သတိ ဝင်နေမိ ပါ တော့တယ်ဘုရား။
‌ေမောင်းထောင် မြေဇင်း ဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင့် ဆရာတော် ဘုရားများအား ဦးတင်လျက် ၊ပါဘုရား ၊အကျိုးဆောင် Admin အဖွဲ့ရဲ့ တရား မရှင်းလင်း သည်များ ကို.. အမေး အဖြေ … အချိန်လေး စေတနာ အ ပြည့်ဖြင့်‌ ဖြေ ကြားပေး တဲ့ အတွက် လည်း အထူး ကျေးဇူး တင်ပါ ကြောင်း မှတ်တန် တင်အပ် ပါသည် ရှင့်၊online တရား စခန်းအ တွေ့အကြုံ လေး အ နည်း ငယ်‌ေဝမျှ တင်ပြ ချင်မိလို့ ရေးတင် လိုက်မိ ပါသည်….အမှား များပါ ပါက သီးခံခွင့် ပေးပါ တောင်းပန် အပ်ပါသ ည်၊ တပည့်တော် အဖို့ မောင်းထောင်‌ေြမဇင်း တရား စခန်းကို သိရှိ ကြားဘူး ခဲ့တာ ကြာခဲ့ ပေမဲ့ အခွင့်မသာ လို့အားထုတ် ခွင့်မရ ရှိခဲ့တာ ကို…အခုလို online မှတရား ဝင်ခွင့်ရ ရှိခဲ့လို့ အတိုင်း မသိဝမ်း မြောက်မိ ရင်း…တ ကယ်ဖြစ် ချင်တ ကယ် လုပ် အဟုတ် ထူးပါကြောင်း ပြောကြား ရင်း၊ တရားထူး တရား မြတ်များ ရကြ ပါစေ ရှင်။
Daw Theingi Thein (Facebook Accountမှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)